Indawo entle esecaleni. kufutshane nesitrato sabantu abahamba ngeenyawo (embindini) - I-Airbnb
Indawo entle esecaleni. kufutshane nesitrato sabantu abahamba ngeenyawo (embindini)
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguNurlan
Indawo yam ngumxube we-scandinavian kunye ne-loft design(ilungisiwe ngo-2019). I-35 sq.m. yayo eza kuthi zava kubantu abayi-2. Indawo ikufanele ngokupheleleyo ukubuka i-Almaty. Iflethi ekwindawo ephakathi esixekweni ekuthiwa 'sisikwere segolide'. Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (100-200m) uza kufumana izitrato zabantu abahamba ngeenyawo (izitrato zokuhamba) iPanfilov str. kunye neZhibek Zholy str., I-Astana Square, iivenkile ezinkulu zokutyela, ii-bakerys kunye neevenkile zokutyela kufutshane, isikhululo se-metro (i-Im), iivenkile ezinkulu.
Indawo yam yiflethi okanye indlu ekwicomplex eqhelekileyo (35sq.m.), kungekhona igumbi lokulala kwizindlu zikawonke-wonke ezifana nawe onokuzifumana apha kuAirbnb (15-25sq.m.).
Iflethi yam inazo zonke izinto ezidingekayo ukuze kuhlalwe kamnandi. Ikhitshi elinezixhobo zetafile,izinto zokupheka. Isofa, i-cable TV (32'), i-Wi-Fi yasimahla. Ibhedi (160*200) kunye nelinen yebhedi eayiniweyo + iitawuli kunye nezinto ezinokusetyenziswa zangasese, i-hairdryer. Indawo yokusebenzela, umatshini wokuhlamba impahla, iayini, iwardrobe, ibhalkhoni encinci.
Nceda uqaphele ukuba iflethi yam ikumgangatho wesithathu yaye ayinayo ilifti okanye ilifti. Andikwazi ukukunceda ngemithwalo yakho ngenxa yeengxaki zam.
Le ndawo ithandwa kakhulu ngabakhenkethi, unokuva umoya wesixeko ohlala apha, yonke into oyifunayo ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo, zonke iindawo zokuphumla ezithandwayo kunye neebhari zikufuphi, ngokukodwa kwizitrato zabantu abahamba ngeenyawo (iArbat nePanfilov str.) okanye kufutshane, iivenkile ezinkulu (iPaki yeGreen bazar, iPaki yabalindi abayi-28 abalindi bePanfilov, iCathedral yasePortugal, iMyuziyam, iOpera kunye neBallet Theatre, iBath Arasan. Isikhululo seMetro sikude ngeemitha eziyi-. Iivenkile zokutya iiyure eziyi-24.
Umbuki zindwendwe ngu- Nurlan
Ndiza kukuvuyela ukunceda okanye ukuba ufuna nawaphi na amacebiso okanye amacebiso uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam